Unoongorora Sei Maitiro e SEO? 6 Matipi kubva kune Semalt Nyanzvi
Injini dzekutsvaga zvikara zvisinganzwisisike. Masimba-evanesimba ane masimba eInternet, vanofanirwa kuona kuti vanounza iwo chete mhando yepamusoro uye yakakodzera kwazvo mibairo kune vashandisi vavo, kuti varege kusundidzirwa parutivi nekuda kwemamwe sarudzo dziri nani.
Kuti uendese izvo zvekutsvaga zvemhando yepamusoro, injini yekutsvaga inoda kuve nechokwadi kuti iyo chaiyoiyo algorithm yavanoshandisa kukwikwidza kutsvaga inoramba iri chakavanzika chakanyatsochengetedzwa. Kupfuura zvese, kana sangano raiziva formula chairo vanogona kurishandisa kuti vakwire masasi.
Padivi rekutsetseka, injini dzekutsvaga dzinofanirwa kupa mawebhusaiti chiratidzo chekuti chii chichavabatsira kumira zvakanaka, zvisizvo, munhu wese angave achimhanya akatenderera. Semhedzisiro yekutsvaga engines seGoogle, Yahoo! uye Bing akapa rondedzero yeinjini yekutsvagisa (SEO) mirongero - runyorwa rwehunhu hunogovaniswa newebsite dzese dzepamusoro.
Uye ndihwo hunhu hunoumba hwaro hwekuongororwa kweSEO.
Sei ndichifanira kuongorora yangu SEO maitiro?
Wakagadzira webhusaiti. Iwe wakatevedzera zvakakosha nheyo dzekutsvaga injini yekubudirira. Wakaisa yako saiti kunze mune ether. Sei uchifanira kuongorora yako SEO maitiro?
Pane zvikonzero zviviri zvikuru.
Chekutanga pane zvese, zivo isimba. Chokwadi, iwe unogona kunge wavaka yako webhusaiti 'nebhuku iri', asi iwe hausi kunyatsoziva kuti iri kuita sei kusvika iwe waedza chaizvo. Zvinogona kunge kuti iwe wakagadziridza webhusaiti yako zvakaringana, asi avo vanokwikwidza vakakwanisa kugadzirisa avo zvishoma zvirinani, uye uchine rimwe basa rekuita. Nekuongorora yako SEO maitiro iwe unokwanisa kuona nzvimbo dzakakosha dzekuvandudza, uye fambisa yakapfuura vakwikwidzi vako mumazinga.
Chechipiri, SEO iri mumamiriro ekuchinja nguva dzose. Kuenderera mberi nekuvandudza kunaka kwemhinduro yavo uye kugara nhanho imwe pamberi pemawebhusaiti, Google, Yahoo! uye Bing inogara ichitaura nezvealgorithms yavo. Izvi zvinoreva kuti chakakusvitsa kumusoro kwenzvimbo svondo rapfuura haigone kukusvitsa ikoko vhiki rino. Kana iwe uchienzanisa iyo SEO miitiro yakanaka yanhasi inopesana nemhando dzakanakisisa dzemakore gumi kana gumi neshanu apfuura, shanduko yacho inoshamisa. Iyi rondedzero yega yega yeGoogle algorithm kugadzirisa inogadzira kuverenga kunonakidza.
Kuongorora maitiro eSEO kunobatsira webhusaiti yako uye kunobatsira kuti uite maitiro ekuchinja. Izvo zvakakosha kune chero munhu anoda kusvika pamusoro peiyo renji uye ugare ipapo.
Saka unoongorora sei SEO?
Nzira 6 dzakakosha dzekuongorora yako SEO maitiro
Zvinonzwisisika kuongororwa kwekuita kwako kunozorora pane zvitanhatu zvakakosha izvo zvakaramba zvichingogara zvichitenderera kuburikidza nenhoroondo yeSEO-zvinhu zvinoumba musimboti weSemalt Analytics. Ngatitarisei kune yega.
Kana mushandisi achinyorera izwi kana chirevo muGoogle, ichi chinova simba rekutyaira kuseri kwekutsvaga. Chokwadi, Google inogona kuongorora nzvimbo yemushandisi, kana nhoroondo yemunhu wavakavaka makore apfuura, asi ruzivo urwu runongowedzera munyu uye pepper mukutsvaga. Chinyorwa chikuru ndiro huru.
Kana Google ichidambura mambure ayo pamusoro peWorld Wide Web mukutsvaga aya mazwi akakosha, webhusaiti yako ichave yakabatwa here? Iwe unoziva here ese akakosha mazwi ayo webhusaiti yako anofanira kuratidza yakapihwa zvigadzirwa zvaunotengesa uye indasitiri iwe yauri? Kana iwe uri semhuri yemutemo fekitori muLondon, iwe unoratidzira semhedzisiro ye'mhuri yemutemo London '? Kana iwe uri poto shopu muBrooklyn, unoisa semhedzisiro ye 'pizza Brooklyn'? Iyi mienzaniso yakakosha yekuratidza pfungwa; chaiyo keyword ongororo uye optimization yakanyanya kuwanda.
Keyword ongororo inozivisa iwo mazwi akakosha aunofanirwa kunge uchitarisisa paari uye kupi maanofanirwa kuiswa webhusaiti yako. Kuisa akakosha mazwi munzvimbo dzakakwirira dzekuoneka senge misoro uye metadata ichaona kuti injini dzekutsvaga dzinovaona.
Mumazuva ekutanga ekutsvaga kwe internet, Google yaitsvaga nzira yekuvimbisa kunaka kwemigumisiro yavo. Ivo vakanzwisisa kuti nekuvimba zvizere nemazwi makuru vaizoona mawebhusaiti 'keyword stuffing' -kuisa mazwi akakosha pese pavaigona pane yavo saiti kuitira kuti vakwire pamusoro peiyo renji. Saka ivo vakauya nemhinduro yakangwara: ivo vakaongorora zvinongedzo.
Kufunga kwavo kwaive nyore: kazhinji kubatana kubva kune ekunze masosi kune webhusaiti, iyo yepamusoro mhando iyo webhusaiti iri. Ndicho chikonzero iwe unogara uchiona Wikipedia kumusoro kwekutsvaga - ivo havana hanya nehukuru hwekugadziriswa kwemashoko, asi sekupokana, iyo internet inonyanya kuvimba sosi yeruzivo, mamwe mawebhusaiti anobatana neWikipedia nguva dzose, achikurisa zvakanyanya saiti . Dai iwe usati watoona kare, ndakabatanidza nechinyorwa cheWikipedia mundima iri pamusoro.
Chivakwa chekubatanidza chinotora basa rakakosha muSEO. Kuongorora zvinongedzo zvewebhusaiti yako, mukati uye nezvekunze, zvakakosha kuti unzwisise kuti 'inoremekedzwa' sei webhusaiti yako neinjini zvekutsvaga. Zvemukati zvinowanzoita basa rakakosha mukuvandudza chako chiitiko chekuita, sezvo iwe uchifanira kupa mamwe mawebhusaiti chikonzero chechokwadi chekubatanidza newe.
Yakagadzirwa sei webhusaiti yako zvakanaka? Injini dzekutsvaga dzinotumira 'vashambadzi vewebhu' izvo zvinogaro ongorora internet nekunongedzera zvirimo. Iko kuzorora kwavanounganidza iwo ruzivo rwakakodzera chinhu cheSEO.
Funga nezvayo serwendo rwekutenga. Kune webhu inokambaira seGooglebot , webhusaiti yakanyatsovakwa ichaita sekudongorera musupamaketi nyowani - zvinhu zvese zvakarongedzwa mushe, zvakaiswa mavara zvakajeka, uye zvakaiswa mune iri nyore kunzwisisa mamiriro. Webhusaiti yakavakirwa zvakaipa yakafanana nekutenga kuchitoro chinotengeswa-isina sangano, pasina mabhii, uye zvinhu zvisinganzwisisike zvakakandwa chero kupi uye kupi.
Kuongororwa kwewebsite kunotarisa kudzoka kwewebsite yako. Iyo inokubatsira iwe kunzwisisa kuti nyore sei webhu inokambaira inogona kufamba neyako saiti kuwana ruzivo rwainoda. Iyo zvino inokupa iwe rondedzero yekuvandudza iwe yaungaita kuti uvandudze iyi nharaunda.
Inonyatso kuzivikanwa, yakakurumbira uye yakavimbika mhando yako, kwete kubva kuGoogle maonero, asi mumaziso evanogona kuve vatengi futi?
Kuongorora kwakazara kwebhizimusi kunopa kuona kwakazara kwehupo hwako paInternet-inotarisisa kwete pawebhusaiti yako, asi paongororo yevadzvanyiriri vakaita seGoogle, Facebook, Trustpilot uye Glassdoor, uye inoongorora mashandiro epamhepo epamhepo pachigadzirwa chako. Inokubatsira iwe kuti unzwisise kuti brand yako inoonekwa sei kubva kunze uye inoratidza nzira dzaungasimudzira iwo mafungiro. Izvi zvinongedzo zvinobatsira iwe kukudziridza mushandirapamwe wekubatana mutemo
Iti iwe unowana 70% mamakisi pabvunzo. Chokwadi, ipasa, asi mhedzisiro yacho haireve zvakawanda kutozosvikira iwe uchiziva maitiro akaitwa nevamwe vese. Saizvozvo, iwe haonyatso kuziva izvo kuongorora kwako SEO kunoreva kusvikira iwe wazvienzanisa newe mumakwikwi ako.
Kuongorora kukwikwidza kunoshandisa nzira dzakafanana senge pamusoro kuti unzwisise maitiro ako edhijitari ekudzvinyirira anopikisa iwo evanokwikwidza napo. Izvo zvinotarisa kune aya makambani parizvino nzvimbo, uye zvavari kuita kuti usvike ipapo.
Uye ikozvino kumutambo mukuru. Paunenge iwe waunganidza zvese izvi kuongorora pamwe, inguva yekuisa ruzivo rwako mukuita. Chinangwa chekupedzisira cheSEO ndechokuwana yako saiti webhusaiti kumusoro kune injini dzekutsvaga kwemashoko akakosha, saka kana iwe waongorora chimwe nechimwe chezvinhu zvinopa mukana, inguva yekuongorora mhedzisiro yekuedza kwako.
Yakanaka keyword chinzvimbo kuongororwa ichave yakajairwa (ideised ichiitwa zuva nezuva) uye yakazara. Ichatarisa nzvimbo yako pane dzakawanda injini dzekutsvaga, uye inokupa iwe nekuziva iwe kwaunoda kuti uvandudze chako chinzvimbo. Ichazviratidza kuva yakakosha nekukusundira iwe masosi pamusoro penguva.
Uchishandisa Semalt Analytics kuongorora rako SEO kuita
Semalt Analytics inomata rimwe nerimwe remabhokisi ari pamusoro. Iyo inyanzvi-yewebhu webmaster analytics chishandiso, yakagadzirirwa kukupa iwe kujekesa maonero ako ezvino SEO mamiriro uye nekuburitsa zvisinganzwisisike zvemukati izvo zvichakuona iwe uchikwira munzvimbo dzekutsvaga kune akakosha anodiwa mazwi.
Semalt Analytics inoshanda na:
Kuunganidza dha data
Kugadzira rondedzero yakazara nezve SEO chinzvimbo chako iwe nevako vakwikwidzi
Kupa rondedzero yemazwi akakosha ayo achagadzirisa saiti yako uye kuwedzera traffic
Kutsigira yako SEO kuedza pane anosvika mashanu akasiyana injini dzekutsvaga
Kuongorora masiteki mune chaiyo-nguva uye kuendesa zuva nezuva SEO mushumo
Kupihwa wega maneja wekuongorora kuti atarise maitiro ese
Semalt Analytics inokuendesa iwe ruzivo. Zvaunoita nezvakadzika izvi zviri kwauri. Iwe unogona kuita pavari iwe pachako, kana iwe unogona kubvunza Semalt SEO nyanzvi, uyo anogona kukutungamira kuburikidza nekuisa iyi nyowani zivo mukuita.
Yekutsvagisa injini yekushandisa ihondo inogara iripo. Iwo maponya mapipi anogara achifamba, uye vanokwikwidza vari kusingaperi kutsvaga kuti vakuwane. Asi nekunzwisisa mirairo yemutambo, uye nekushandisa chishandiso chakangwara chakakupa mukana wakanakisa wekuti ubudirire, uri mukana wekuuya muhondo uchikunda.
Saka unomirirei? Izvo zvakasununguka kuti utange neSemalt Analytics- iwe unogona kuwedzera yako webhusaiti kuPR Ongorora izvozvi pasina kubhadhara senti, uye tsvaga chaizvo kuti bhizinesi rako rinogona sei kubudirira SEO.